Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Human Heart လူ့နှလုံး
6. Aorta (အေရိုတာ)
7. Pulmonary Artery (ပါလ်မိုနရီ-အာထရီ)
8. Pulmonary Vein (ပါလ်မိုနရီ-ဗိန်း)
9. Right Atrium ညာ (အေထရီယမ်)
10. Right Ventricle ညာ (ဗင်ထရီကယ်လ်)
11. Left Atrium ဘယ် (အေထရီယမ်)
12. Left Ventricle ညယ် (ဗင်ထရီကယ်လ်)
13. Papillary Muscles (ပက်ပလရီ) ကြွက်သား
14. Chordae Tendineae (ခေါ်ဒေး-တင်ဒီနေး)
15. Tricuspid Valve (ထရိုင်ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ်)
16. Mitral Valve (မိုင်ထရယ်-ဗာ့လ်ဖ်)
17. Pulmonary Valve (ပါလ်မိုနရီ-ဗာ့လ်ဖ်)
လူ့ Heart နှလုံးဟာ အခေါင်းပါ-အခန်းပါ-ကြွက်သားနဲ့လုပ်တဲ့ အင်္ဂါ ဖြစ်တယ်။ အဖျားရှူးလို့ Cone-shaped ခေါ်တယ်။ ရှေ့မှာ Sternum ရင်ညွန့်ရိုး၊ နောက်မှာ Thoracic vertebral column ရင်ခေါင်းပိုင်း-ကျောရိုး ရှိတယ်။ ရှေကကြည့်ရင် နှလုံးရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံ က ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတယ်။ နှလုံးထိပ် ချွန်တဲ့နေရာကို Apex (အေးပက်စ်) ခေါ်တယ်။ နှလုံးဟာ Pump (ပန့်မ်) စုတ်ထုတ်စက် သဘောဖြစ်တယ်။ အမှန်က စုတ်ထုတ်စက် နှစ်ခုတွဲထားသလို ဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျား-လူကြီး လက်သီးဆုပ် အရွယ်ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အတိုင်းအတာ ပြောရရင် ၅ x ၃့၅ x ၂့၅ လက္မ။ အမျိုးသမီး နှလုံးက ၉ အောင်စ (၂၅ဝ ဂရမ်)၊ အမျိုးသားတွေမှာ ၁ဝ့၅ အောင်စ (၃၅ဝ ဂရမ်) လေးပါတယ်။ (ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက ဦးနှောက်ထက် နှလုံးသားကြီးသူလို့ ရေးဘူးတယ်။) အလွှာ ၃ ထပ်ရှိတယ်။ အတွင်းဆုံး ထပ်ကို Endocardium (အင်ဒိုကားဒီးယမ်)၊ အလယ်ထပ်ကို Myocardium (မိုင်ယိုကားဒီယမ်) နဲ့ အပြင်ဆုံးက အဖုံးကို Pericardium (ပယ်ရီကားဒီယမ်) ခေါ်တယ်။ အဖုံးက နှစ်လွှာပါ-အိတ်လိုရှိလို့ Pericardial sac (ပယ်ဒီကာဒီရယ်-ဆက်) ခေါ်တယ်။ အိတ်ထဲမှာ အရည်နဲနဲ ရှိနေတယ်။
Chambers of the Heart အခမ်း ၄ ခန်း
1. Right atrium (RA) ညာ အထက်ခန်း၊ (ရိုက်-အေထရီယမ်)၊
2. Right ventricle (RV) ညာ အောက်ခန်း၊ (ရိုက်-ဗင်ထရီကယ်လ်)၊
3. Left atrium (LA) ဘယ် အပေါ်ခန်း၊ (လက်ဖ်-အေထရီယမ်)၊
4. Left ventricle (LV) ဘယ် အောက်ခန်း၊ (လက်ဖ်-ဗင်ထရီကယ်လ်)၊
Valves of the Heart အဆို့ရှင် ၄ ခု
နှလုံးရဲ့ အခန်းတိုင်းမှာ One-way valve တဖက်သွား အဆို့ရှင်တွေ ရှိတယ်။ သွေးတွေကို သွားစေချင်တဲ့ ဘက်ကိုသာ သွားစေဘို့ ဖြစ်တယ်။ နှလုံးကြွက်သားတွေကို Contract ညှစ်လိုက်ရင် အဆို့ရှင်တွေ ပွင့်လာတယ်။ ပြီးရင် ပြန်ပိတ်တယ်။
1. ညာ-အထက်ခန်းမှာ ရှိတာက Tricuspid valve (ထရွိုင်ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ်)၊ Three-flapped, Three cusps အဖက် ၃ ခု ပါတယ်။
2. ညာ-အောက်ခန်းမှာ ရှိတာက Pulmonary valve (ပါလ်မိုနရီ-ဗာ့လ်ဖ်)၊ Crescent-shaped cusps လခြမ်းပုံ ၃ ခုစီ ပါကြတယ်။ Semilunar valves လို့လဲ ခေါ်တယ်။
3. ဘယ်-အပေါ်ခန်းမှာ ရှိတာက Mitral valve (မိုင်ထရွယ်-ဗာ့လ်ဖ်)၊ Mitral valve မှာ Flaps အဖတ် နှစ်ဖတ် ပါလို့ Bicuspid valve လို့လဲခေါ်တယ်။
4. ဘယ်-အောက်ခန်းမှာ ရှိတာက Aortic valve (အေယိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်) ခေါ်တယ်။ Flaps အဖတ် နှစ်ဖတ် ပါလို့ Bicuspid valve လို့လဲ ခေါ်တယ်။
Mitral valve (မိုင်ထရယ်-ဗာ့လ်ဖ်) ဆိုတာ မှတ်ဘို့ ကောင်းတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ သိကြမှာပါ။ ခရစ်ယာန် (ဘစ်ရှော့) ဆောင်းရတဲ့ ဦးထုပ်တမျိုးကို Bishop's mitre ကနေလာတဲ့ အသုံးအနှုံး ဖြစ်တယ်။ လေးဘက်နာ ခေါ်တဲ့ Rheumatic fever (ရူမက်တစ်) အဖျားကနေ ဆက်ဖြစ်တတ်တဲ့ Rheumatic heart disease (ရူမက်စတစ်) နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ရင် Mitral stenosis (မိုက်ထရယ်-စတီနိုးဆစ်) အဆို့ရှင်-ကျဉ်းတာ ဖြစ်တယ်။ တချို့ မွေးရာပါလဲ ဖြစ်တယ်။ Mitral regurgitation (မိုင်ထရယ်-ရီဂါဂျီတေးရှုင်း) အဆို့ရှင် ကျယ်-မလုံတာက အမျိုးသမီး အသက်ကြီးသူတွေမှာ ပိုများတယ်။ နှလုံးသွေးလာနည်းလို့ ဖြစ်တဲ့ Ischemic heart disease နှလုံးရောဂါကနေလဲ ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ Left ventricle ဘယ် အောက်ခန်း ကြီးသူတွေမှာလဲ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ Rheumatic fever ကနေလဲ ဖြစ်သေးတယ်။
Blood Flow သွေးလှည့်ပတ်ပုံ
• တကိုယ်လုံးက သွေးအဟောင်းတွေဟာ ကိုယ်အထက်ပိုင်းက Superior vena cava (SVC) (ဆူပီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ) သွေးပြန်ကြောကြီးနဲ့ အောက်ပိုင်းကဆိုရင် Inferior vena cava (IVC) (အင်ဖီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ) သွေးပြန်ကြောကြီးကနေ နှလုံးဆီကို ဝင်လာကြတယ်။ ညာဘက် (အေထွီယမ်) က လက်ခံတယ်။
• ပြီးတော့ (ထွိုင်ကပ်စပစ်-ဘာ့လ်ဖ်) ကို ဖြတ်လို့၊ အောက်ဖက်က ညာဘက် (ဗင်ထွီကယ်လ်) ကို သွေးတွေ ရောက်လာတယ်။
• ညာဘက် (ဗင်ထွီကယ်လ်) ညှစ်ထုတ်ရင် သွေးတွေဟာ Pulmonary artery (ပါလ်မိုနရီ-အာထွီ) အဆုပ်- သွေးလွှတ်ကြောကတဆင့် အဆုပ်တွေထဲ ရောက်သွားတယ်။ အသက်ရှူတဲ့ လေထဲက အောက်စီဂျင်ကို သုံးပြီး၊ သွေးအသန့် ဖြစ်လာတယ်။
• အောက်စီဂျင်ပါတဲ့ သွေးက Pulmonary veins (ပါလ်မိုနရီ-ဗိန်း) အဆုပ်-သွေးပြန်ကြောကတဆင့် ဘယ်ဘက် (အေထွီယမ်) ကို ရောက်လာတယ်။
• ဘယ်ဘက် (အေထွီယမ်) က Mitral valve (မိုင်ထရွယ်-ဗာ့လ်ဖ်) ကို ဖြတ်ပြီး အောက်က ဘယ်ဘက် (ဗင်ထွီကယ်လ်) ထဲရောက်တယ်။
• ဘယ်ဘက် (ဗင်ထွီကယ်လ်) က ညှစ်ထုတ်ရင် (အေယိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်) ကိုဖြတ်ပြီး Aorta (အေအိုတာ) သွေးလွှတ်ကြောကြီးထဲ ရောက်တယ်။ သူကနေထွက်တဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေကတဆင့် တကိုယ်လုံးကို သွေးအနှံ့ ရောက်သွားတော့တယ်။
အထက်ခန်းတွေနဲ့ အောက်ခန်းတွေက သွေးကို တပြိုင်နက်တည်း ညှစ်ထုတ်ကြတယ်။ နှလုံး ညှစ်တာနဲ့ လျှော့တာ အလုပ် နှစ်မျိုးပါတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုကို Cardiac Cycle နှလုံး-သံသရာစက်ဝိုင်း ခေါ်တယ်။ ဖြစ်စဉ် တပါတ်က (ဝ့ဂ) စက္ကန့်သာ ကြာတယ်။ ညှစ်ထုတ်တဲ့ အဆင့်ကို Systolic phase နဲ့ ပြန်လျှော့ပေးတဲ့ အဆင့်ကို Diastolic phase လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် Blood pressure သွေးဖိအား တိုင်းတဲ့အခါ အထက်သွေးချိန်ကို Systolic Pressure (ဆစ်စတိုးလစ်-ပရှက်ရှာ) နဲ့ အောက်သွေးချိန်ကို Diastolic pressure (ဒိုင်ယာစတိုးလစ်-ပဂက်ရှာ) လို့ ခေါ်တယ်။ နှလုံးတခါညှစ်ရင် သွေး 70 ml ရှိလို့ တမိနစ်မှာ5Liters ရှိတယ်။ လူတယောက်မှာရှိတဲ့ သွေးထုထည် ၅ လီတာနဲ့ အတူတူဘဲ။
ဆရာဝန်တွေက Stethoscope (စတက်သိုစကုပ်) နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က နားက ကြားတာကို ပါးစပ်ကနေ ပြန်ပြောရင် “ဒုတ်-ဒုတ်” ဆိုပြီး ခပ်လွယ်လွယ် အရင်သံရော နောက်သံကို တမျိုးထဲ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ Lub-Dub “လပ်ဖ်-ဒပ်ဖ်” လို့ အသံ ၂ မျိုး ခွဲထွက်ကြတယ်။ အသံတွေ ပြန်ပြောကြတာ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကွာတာ ဒီနေရာမှာသာ မဟုတ်ပါ။ ကြက်တွန်တာကို “အောက်-အိ-အီ-အွတ်” လို့ ပြောတာကို သူတို့က Cockadoodle doo လို့ ရေးကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ အသံကို ဖေါ်ပြတာ မတူတာတော့ ထားပါ။ ပဌမသံနဲ့ ဒုတိယသံ ခွဲပြောတာက စနစ်ကျတယ်။
1. First Heart Sound ပဌမသံဟာ (ထရွိုင်-ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ်) နဲ့ (မိုင်ထရွယ်-ဗာ့လ်ဖ်) တွေ ပိတ်တဲ့ အသံနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာနတဲ့ သွေးလှိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
2. Second Heart Sound ဒုတိယသံဟာ (ပါလ်မိုနရီ-ဗာ့လ်ဖ်) နဲ့ (အေယိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်) တွေ ပိတ်တဲ့ အသံနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာနတဲ့ သွေးလှိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
Pulse ဆိုတာ ရူပဗေဒ နဲ့ ရုက္ခဗေဒမှာတော့ တမျိုးစီ ခေါ်ကြတယ်။ ဆေးပညာမှာ Pulse Rates (ပါ့လ်စ်-ရိတ်) ဆိုတာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ စမ်းတဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကို ခေါ်တယ်။ အမှန်က နှလုံးခုန်တာကို အလွယ်စမ်းတာ ဖြစ်တယ်။ တခြား နေရာတွေမှာလဲ စမ်းလို့ရပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်-ရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ လည်ပင်းစမ်းပြတတ်တယ်။
Heartbeat (ဟာ့တ်-ဘိ-တ်) တမိနစ်မှာ ၇၂ ခါခုန်တယ်။ တနေ့မှာ အခါ ၁ သိန်။ ၁ နှစ် ၃၈ သန်း။ နှလုံးခုန် မြန်တာကို Tachycardia ခေါ်တယ်။ နှလုံးခုန် နှေးတာကို Bradycardia ခေါ်ပြီး နှလုံးခုန်မမှန်ရင် Arrhythmias လို့ ခေါ်တယ်။ Heart rate (Pulse Rate) က အသက် မတူရင် မတူဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၅ ပါတ်ရှိရင် အထဲကကလေး နှလုံး စခုန်နေပြီ။ ခုန်ကာစမှာ အမေလို တမိနစ်မှာ ၈ဝ-၈၅ ခုန်ရာကနေ တရက်မှာ ၃ ခါတိုးနှုန်းနဲ့ မြန်မြန်လာတယ်။ ၉ ပါတ်ရှိရင် ၁၇၅ အထိရှိလာတယ်။ ဒိနောက် ပြန်နှေး လာတယ်။ ပုံမှန် Fetal heart rate ဗိုက်ထဲကလေး နှလုံးခုန်နှုန်း တမိနစ်မှာ ၁၂ဝ-၁၈ဝ ရှိတယ်။ မွေးစကနေ ၆ လကလေး = ၁၃ဝ၊ တနှစ်သား = ၁၂ဝ၊ ၃-၆ နှစ်သား = ၁ဝဝ၊ ၈ နှစ်သား = ၉ဝ၊ ၁၂ နှစ်သား = ၈၅၊ လူကြီး = ၆ဝ-၁ဝဝ။
Electrical System ကိုယ်ခန္ဓာမှာ လျှပ်စစ်စနစ် နဲ့ လျှပ်စစ်ကို သုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Special cells စပါယ်ရှယ် (ဆဲလ်) တွေ ရှိနေလို့ပါ။ Pacemaker cells (ပေ့စ်-မိတ်ကာ-ဆဲလ်) တွေဆိုတာ နှလုံးထဲမှာ ရှိသေးတယ်။ Electrical impulses လျှပ်စစ် (အင်မ်ပါ့လ်စ်) ကြောင့် နှလုံးကြွက်သားတွေ Contract ညှစ်စေတယ်။ မွေးရာပါ (ပေ့စ်-မိတ်ကာ-ဆဲလ်) ကို Sinoatrial node (SA node) (စိုင်နိုအေရီရယ်-နုတ်) လို့ ခေါ်တယ်။ ညာ-အထက်ခန်းမှာ ရှိတယ်။ သူ့ကို Medulla Oblongata ခေါ် ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုက ထိန်းပေးနေတယ်။
SA node ကနေ Specialized fibers (စပါယ်ရှယ်-ဖိုင်ဗာ) အာရုံကြောတွေ ဖြာထွက်နေတယ်။ အပေါ်ခန်းတွေမှာရှိတဲ့ (ဖိုင်ဗာ) တွေကနေ အပေါ်နှစ်ခန်းလုံးကို တပြိုင်ထဲ ညှစ်စေတယ်။ ဝ့၎ စက္ကန့်သာ ကြာတယ်။ နှလုံး အောက်ခမ်းတွေကို သွားတဲ့ (စပါယ်ရှယ်-ဖိုင်ဗာ) ကို Bundle of His (ဘန်ဒယ်လ်-အော့ဖ်-ဟစ်) လို့ နာမယ်ပေးထားတယ်။ သူကနေ ဆက် ဖျာထွက်တာတွေကို Purkinje fibers (ပါကင်ဂျီ-ဖိုင်ဗာ) လို့ ခေါ်ပြန်တယ်။
Autonomic nervous system (အော်တိုနောမစ်-နားဗတ်စ်-ဆစ်စတမ်) အလိုအလျောက် အာရုံကြောစနစ်က အာရုံကြောတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီစနစ်မှာလဲ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Sympathetic nervous system (ဆင်ပသက်တစ်-နားဗတ်စ်-ဆစ်စတမ်) နဲ့ Parasympathetic nervous system (ပါရာ-ဆင်ပသက်တစ်-နားဗတ်စ်-ဆစ်စတမ်) တွေ ဖြစ်တယ်။ (ဆင်ပသက်တစ်) စနစ်ကြောင့် နှလုံးခုန်တာ မြန်စေ-အားကောင်းစေပြီး၊ (ပါရာ-ဆင်ပသက်တစ်) ကြောင့် နှေးစေ-အားနည်းတယ်။
Electrical waves လျှပ်စစ်-လှိုင်းတွေကို တိုင်းတာလို့ ရတယ်။ Graph (ဂရပ်) မျဉ်းနဲ့ ပြတာကို Electrocardiogram (အလက်ထရို-ကာဒီယို-ဂရမ်) (ECG) (EKG) ခေါ်တယ်။ မျဉ်းတန်းတွေကို တခုချင်း နာမယ်ပေးထားတယ်။
• P wave (ပီ-ဝေ့ဖ်) ဆိုတာ နှလုံးအပေါ်ခန်းတွေမှာ ညှစ်ခါနီးရှိတဲ့ Spread of electrical activity လျှပ်စစ် ပြန့်နှုန်း ဖြစ်တယ်။
• QRS complex (ကျူ-အာရ်-အက်စ်-ကွန်ပလက်စ်) ဆိုတာ နှလုံးအောက်ခန်းတွေမှာ ညှစ်ခါနီးရှိတဲ့ Spread of electrical activity လျှပ်စစ် ပြန့်နှုန်း ဖြစ်တယ်။
• T wave (တီ-ဝေ့ဖ်) ဆိုတာ နှလုံးအောက်ခန်းတွေမှာ Recovery phase ပြန်ကျလာချိန်မှာ တိုင်းတာဖြစ်တယ်။
နှလုံးမှာ သူ့ကိုယ်သူ သွေးလှည့်စနစ် Blood Supply ရှိတယ်။ Coronary arteries (ကိုရိုနရီ-အာထရီ) တွေလို့ ခေါ်တယ်။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ Coronary artery disease (CAD) ဆိုတာ အဲဒီသွေးကြောတွေ ကျဉ်းခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေမှာ လာပိတ်တာကို Heart attack (ဟတ်-အတက်ခ်) ရတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
5. Tricuspid Valve (ထရိုင်ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ်)
6. Pulmonary Valve (ပါလ်မိုနရီ-ဗာ့လ်ဖ်)
7. Aortic valve (အေရိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်)
8. Mitral Valve (မိုင်ထရယ်-ဗာ့လ်ဖ်)
1. Superior Vena Cava (ဆူပီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ)
2. Inferior Vena Cava (အင်ဖီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ)
4. Tricuspid Valve (ထရိုင်ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ်)
10. Mitral Valve (မိုင်ထရယ်-ဗာ့လ်ဖ်)
12. Aortic valve (အေရိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်)
1. SA node (အက်စ်-အေ နုတ်)
2. AV node (အေ-ဗွီ နုတ်)
3. Bundle of His (ဘန်ဒယ်လ်-အော့ဖ် ဟစ်)
4. Left bundle branch ဘယ် ဘက်သွား (ဘန်ဒယ်လ်)
5. Purkinje fibres (ပါကင်ဂျီး-ဖိုင်ဗာ)